Ch 26 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 26 Matthew
26:1 Ary nony fa, when Jesus had completed all these words, hoy izy tamin'ny mpianany,
26:5 Fa hoy izy ireo:, "Tsy amin'ny andro firavoravoana, fandrao hisy tabataba amin'ny olona. "
26:6 And when Jesus was in Bethania, tao an-tranon'i Simona boka,
26:8 Fa ny mpianatra, nahita izany, were indignant, nanao hoe:: “What is the purpose of this waste?
26:10 Fa Jesosy, fantany izany, hoy izy taminy: “Why are you bothering this woman? For she has done a good deed to me.
26:13 Amen Lazaiko aminareo, wherever this Gospel will be preached in the whole world, what she has done also shall be told, fahatsiarovana azy. "
26:14 Ary ny anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, izay atao hoe Jodasy Iskariota, lasa nankany amin'ny mpitarika ny mpisorona,
26:15 ary hoy izy taminy, "Inona no ianao vonona ny hanome ahy, raha hanolotra azy eo aminareo?"Dia nanendry sekely volafotsy telo-polo ho azy.
26:16 Ary avy dia tamin'ny, dia nitady izay andro hahazoany hamadika Azy.
26:17 Avy eo, tamin'ny andro voalohany tamin'ny mofo tsy misy lalivay, nanatona an'i Jesosy ny mpianatra, nanao hoe:, "Aiza no tianao hamboarinay hihinananao ny Paska?"
26:18 Dia hoy Jesosy:, "Mankanesa any an-tanàna, ny anankiray, ka lazao aminy: 'Mpampianatra hoy: Ny fotoana efa antomotra. Aho mitandrina ny Paska miaraka aminao, miaraka amin'ny mpianatro. ' "
26:19 Ary ny mpianatra dia nanao araka izay voatendry ho azy ireo i Jesosy. Dia namboatra ny Paska.
26:20 Avy eo, rehefa hariva tonga, dia nipetraka nihinana mbamin'ny mpianany roa ambin'ny folo lahy.
26:21 Ary raha mbola nihinana, hoy izy:: "Amen Lazaiko aminareo, fa ny anankiray aminareo no efa akaiky hamadika Ahy. "
26:22 Ary rehefa malahelo be, tsirairay ny iray tamin'izy ireo nanao hoe:, "Azo antoka fa, dia tsy izaho, Tompo?"
26:23 Fa izy namaly tamin'ny hoe:: "Izay miara-manatsoboka ny tanany amiko ho any an-lovia, ny izy no hamadika Ahy.
26:24 Tokoa, ny Zanak'olona dia mandeha, araka ny efa voasoratra hilaza Azy. Nefa lozan'izay olona hahazoana izay ny Zanak'olona dia hatolotra. Mety ho tsara kokoa ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. "
26:25 Ary Jodasy, ilay namadika Azy, namaly ny hoe:, "Azo antoka fa, dia tsy izaho, Master?"Ary hoy izy taminy, "Hianao no niteny izany."
26:26 Ary raha mbola nihinana ny sakafo, Jesosy nandray mofo;, Dia nitso-drano dia novakiny ka natolony ny mpianany, ka hoy Izy:: "Raiso, ka hano. Ity no tenako. "
26:27 Ary naka ny chalice, dia nisaotra. Dia nomeny azy ireo, nanao hoe:: "Misotroa avy amin'izany, ianareo rehetra.
26:28 Fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho toy ny famelan-keloka.
26:29 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, Aho, dia tsy mba hisotro intsony avy amin'ity vokatry ny voaloboka, mandra-pahatongan'ny andro izay dia misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny Raiko. "
26:30 Ary rehefa nihira fiderana tamin'ny, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva.
26:31 Dia hoy i Jesoa taminy: "Ho rehetra hiala amiko amin'ity alina ity. Fa efa voasoratra: 'Hamely ny mpiandry, ary ny ondry ny andian'ondry dia miely. '
26:32 Fa rehefa efa nitsangana indray, Aho, dia hialoha anareo ho any Galilia. "
26:33 Ary Petera namaly ka nilaza taminy, "Na dia ny olon-drehetra efa lavo niala tamin'ny aminareo, Dia tsy ho tafintohina akory izy. "
26:34 Fa hoy Jesosy taminy, "Amen Lazaiko aminareo, fa amin'ity alina ity, mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo ianao. "
26:35 Hoy Petera taminy:, "Na dia tsy maintsy ho ahy mba hiara-maty aminao, Dia tsy handà anao. "Ary ny mpianany niteny toy izany koa.
26:36 Ary Jesosy nandeha niaraka taminy ho any amin'ny saha, izay atao hoe Gethsemani. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, "Mipetraha eto, raha mbola mankany hivavaka Aho. "
26:37 Ary nitondra an'i Petera mbamin'izy roa lahy zanak'i Zebedio, dia nalahelo am-po sy nalahelo.
26:38 Dia hoy izy taminy: "Ny fanahiko dia feno alahelo, na dia ho amin'ny fahafatesana. Mijanòna eto ka tandremo fiaretan-tory amiko. "
26:39 Ary manohy kelikely, dia niankohoka niankohoka ny tarehiny, nivavaka ka nanao hoe:: "Ny raiko, raha azo atao, aoka izany chalice hesorina amiko. Na izany aza tena, aoka tsy ho ny sitrapoko, fa ny anao. "
26:40 Ary dia nanatona ny mpianany ka nahita azy matory. Ary hoy izy tamin'i Petera: "Noho izany, ianareo no tsy afaka foana fiaretan-tory amiko na dia ora iray?
26:41 Aoka ianao ho mailo, ka mivavaha, ka dia mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Tokoa, ny toe-tsaina vonona, fa ny nofo no malemy. "
26:42 Indray, fanindroany, dia nandeha izy ka nivavaka, nanao hoe:, "Ny raiko, chalice raha tsy levona, raha tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no hatao. "
26:43 Ary indray, dia nandeha izy ka nahita azy ireo matory, fa efa nilondolondo ny masony.
26:44 Dia nandao azy aoriana, Dia lasa indray Izy ka nivavaka fanintelony, nanao izany teny izany ihany.
26:45 Avy eo dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: "Matoria izao sy ny fitsaharana. Indro, ny fotoana manakaiky, ary ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-tànan'ny mpanota.
26:46 Mitsangàna; aoka isika handeha. Indro, izay no hamadika Ahy mitaona akaiky. "
26:47 Ary raha mbola niteny, indro, Jodasy, iray amin'ireo roa ambin'ny folo lahy, tonga, ary ny fehiny dia nisy vahoaka be mitondra sabatra sy langilangy, nalefa avy amin'ny mpitarika ny mpisorona sy ny loholon'ny vahoaka.
26:48 Ary ilay namadika Azy nanome famantarana ny, nanao hoe:: "Na zovy na zovy no hanoroka, Izy. Hahazo azy. "
26:49 Ary manatona haingana an'i Jesosy, hoy izy:, "Arahaba, Mpampianatra ô. "Ary dia nanoroka azy.
26:50 Ary hoy Jesosy taminy:, "Friend, Fa inona no antony nahatongavanareo?"Dia nanatona izy ireo, ary hametraka ny tànany amin'ny an'i Jesosy, ary tsy niteny azy.
26:51 Ary indro, ny anankiray tamin'izay nomba an'i Jesosy, manitatra ny tànany, nanatsoaka ny sabany, ary namely an'ilay mpanompon'ny mpisoronabe, ka nahafaka ny sofiny.
26:52 Dia hoy Jesosy taminy:: "Ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao eo amin'ny toerany. Fa izay rehetra mitondra ny sabatra no hovonoina amin'ny sabatra.
26:53 Sa ny hevitrao fa tsy mahazo mangataka amin'ny Raiko, mba homeny ahy, izao ankehitriny izao ihany, mihoatra noho ny roa ambin'ny folo legiona anjely?
26:54 Ahoana no mety ho tanteraka ny Soratra Masina, izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany?"
26:55 Ary tamin'izany ora izany, Hoy i Jesosy tamin'ny vahoaka: "Tsy nivoaka, toy ny jiolahy, mitondra sabatra sy langilangy hisambotra Ahy. Na izany aza dia nipetraka aminareo isan-andro, nampianatra tao amin'ny tempoly, nefa tsy nahatratra ny ahy.
26:56 Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatonga ny Soratra Masina ny mpaminany mba hahatanteraka. "Dia nandositra ny mpianatra rehetra, nandao azy.
26:57 Fa ireo izay nihazona an'i Jesosy dia nitondra Azy ho any amin'i Kaiafa, ny mpisoronabe, izay misy ny mpanora-dalàna sy ny loholona nakamban'Andriamanitra.
26:58 Ary Petera nanaraka Azy teny lavidavitra eny, hatrany amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisoronabe. Ary nony anatiny, dia nipetraka tao amin'ny mpiandry, ka dia mba hahita izay hiafarany.
26:59 Dia hoy ny mpitarika ny mpisorona sy ny Synedriona rehetra nitady vavolombelona hiampanga an'i Jesosy lainga, ka dia mba hanolorany azy ho faty.
26:60 Ary izy ireo tsy nahita, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga handroso. Avy eo, any amin'ny tena farany, nisy roa lahy tonga teo,
26:61 ka hoy izy:, "Ity lehilahy ity hoe:: Aho Mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra, ary, rehefa afaka telo andro, hanorina azy io indray izany. ' "
26:62 Ary ny mpisoronabe, eny, nifoha, hoy izy taminy:, "Efa na inona na inona ny hamaly ny inona ireo olona miampanga anao?"
26:63 Fa Jesosy tsy niteny. Ary ny mpisoronabe nanao taminy hoe:, "I hamatotra anao amin'ny fianianana ho velona Andriamanitra mba hilaza aminay, raha Hianao no Kristy, ny Zanak 'Andriamanitra. "
26:64 Fa hoy Jesosy taminy: "Hoy ianao izany. Nefa tena lazaiko aminareo, any aoriana ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny herin'Andriamanitra, sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. "
26:65 Ary tamin'izany ny mpisoronabe dia nandriatra ny fitafiany, nanao hoe:: "Efa niteny ratsy izy. Nahoana isika no mbola mila vavolombelona? Indro, ankehitriny efa renareo ny fitenenany ratsy.
26:66 Ahoana no toa anao?"Dia namaly tamin'ny hoe:, "Izy no meloka ho amin'ny fahafatesana."
26:67 Dia nororany ny tavany, dia namely azy tamin'ny totohondry. Ary ny sasany namely ny tavany tamin'ny tahamaina,
26:68 nanao hoe:: "Maminania ho antsika, O Kristy. Iza moa ilay namely anao?"
26:69 Na izany aza tena, Petera nipetraka teo ivelany, teo an-kianja. Ary nanatona azy vaditsindranon'olona, nanao hoe:, "Hianao koa nomba an'i Jesosy, ilay Galiliana."
26:70 Fa izy nandà teo imason'ny olona rehetra, nanao hoe:, "Tsy fantatro izay lazainao."
26:71 Avy eo, araka izay nivoaka tamin'ny vavahady, hafa koa nahita azy mpanompovavinao. Dia hoy izy ireo tamin'izay teo, "Ity koa nomba an'i Jesosy avy any Nazareta."
26:72 Ary indray, izy nandà tamin'ny fianianana, "Fa tsy fantatro izany Lehilahy izany."
26:73 Ary nony afaka kelikely, ireo izay nijoro teo akaiky teo ka nanao tamin'i Petera: "Marina tokoa fa, ianao koa dia ny iray tamin'izy ireo. Fa na dia ny fomba miteny manambara anao. "
26:74 Avy eo izy vao niozona sy nianiana izy fa tsy fantany ny olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno.
26:75 Ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy, izay efa nolazainy: "Mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo ianao. "Ary nandeha ivelany, dia nitomany mafy dia mafy.